Ndị America echeghị na ọrịa kacha njọ agwụla
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ndị America echeghị na ọrịa kacha njọ agwụla
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Education • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Obi ike ndị America na ajọ ọrịa na -efe efe nke coronavirus belatara ruo 23%.
23% nke ndị America na-ekwu na ajọ ọrịa COVID-19 agwụla.
74% nke ndị America na -akwado iyi mkpuchi ihu n'ụlọ akwụkwọ.
75% nke ndị America na -akwado iyi mkpuchi ihu na mpaghara ọha.
Nsonaazụ ntuli aka nke mba ọhụrụ ewepụtara na -ekpughe na ntụkwasị obi ndị America na nke kacha njọ nke ọrịa coronavirus agbadala ruo 23% na -abanye na ọdịda nke 2021 ma e jiri ya tụnyere ịbanye n'oge ọkọchị 2021 (53%) dị ka oke Delta na -efe efe nke ukwuu.
23% nke ndị AMERICA kwuru na ọ kacha njọ CORONAVIRUS PANDEMIC agafeela (gbadara site na 52% na JUNE 2021 na 25% na February 2021))
A jụrụ ndị zara ajụjụ ma ha kwere na ọrịa kacha njọ agwụla. N'ozuzu, 23% nke ndị zara zara ee, nke na -agbada nke ukwuu karịa 53% na June 2021 na 25% na February 2021 site na ntuli aka mba. Ndị nabatara afọ 18-29 kwenyere na nke kacha njọ agwụla n'ọkwa dị elu (27%) karịa ndị zara afọ 60 na karịa (18%). Ụmụ nwoke kwenyere na ihe kacha njọ agwụla n'ọkwa dị elu (30%) karịa ụmụ nwanyị (17%). Ndị na -aza ajụjụ nwere oke ntụkwasị obi kachasị njọ na ajọ ọrịa na -efe efe nke coronavirus bụ ndị Republican (36%), ndị nnwere onwe (23%) na ndị Democrats (15%) sochiri.
72% nke ndị AMERICA NA -atụ aro ADOLESCENTS dị afọ 12 ruo 18 Nweta ọgwụ mgbochi.
A jụrụ ndị America ma ha ga -akwado ndị ntorobịa dị afọ 12 ruo 18 ka ejiri ọgwụ mgbochi FDA kwadoro. 72% nke ndị zara zara ee. 90% nke ndị Democrats kwuru ee. 66% nke ndị nweere onwe ha/Ndị ọzọ kwuru ee. 53% nke ndị Republican kwuru ee.
74% nke ndị AMERICA na -akwado iyi akwa na ụlọ akwụkwọ iji belata mgbasa nke CORONAVIRUS.
A jụrụ ndị zara ya ma ha na -akwado iyi mkpuchi ihu n'ụlọ akwụkwọ iji belata mgbasa nke coronavirus. 74% ndị nabatara zara ee. 92% nke ndị Democrats kwuru ee. 71% nke ndị nweere onwe ha/Ndị ọzọ kwuru ee. 50% nke ndị Republican kwuru ee.
75% nke ndị AMERICA na -akwado iyi ihe mkpuchi na mpaghara ọha iji belata mgbasa nke CORONAVIRUS.
A jụrụ ndị zara ya ma ha na -akwado iyi mkpuchi ihu na mpaghara ọha iji belata mgbasa nke coronavirus. 75% nke ndị zara zara ee. 92% nke ndị Democrats kwuru ee. 72% nke ndị nweere onwe ha/Ndị ọzọ kwuru ee. 52% nke ndị Republican kwuru ee.